dhagaha carabka ka gali sidaan ookale waa biya baxee | Gaaloos.com
Home » galmada » dhagaha carabka ka gali sidaan ookale waa biya baxee
dhagaha carabka ka gali sidaan ookale waa biya baxee
Sheekada dumarka maskaxda ka waasha waxay u noqonaysaa gabadha waxa ay xiisaynayso.
Gabdho waxaa jira oo jecel in looga sheekeeyo hanti iyo guri dahab, kuwoo waxaa jira ka helo waxbarashada, sidoo waxaa la helaa naago jecel in looga sheekeeyo jacayl iyo raaxo, maxay dareemaan gabdhaha marka looga sheekaynayo raaxada?
Naagaha waxay dareemaan marka loo sheegayo istiinka iyo raaxada macaan xaddhaaf ah, xagga jirka, jirkooda waxay ka dareemaan jiriirico daran xaadada ayaa ka istaagayso, waxay rabtaa marka ay sheekadaas maqasho in ay salaaxdo jirkeeda siiba qoorteeda, jimicsi ayay rabtaa inay samayso.
Moxogga ayay jabinaysaa, taas waxay ka mid tahay astaamaha lagu garto dumarka kacsaday oo qooqay, maxaayeelay marka ay naagta kacsato cambarka wuu bararaa hoos ayuu u degaa wuxuu rabaa in la cabburiyo kursiga ayay isku riixaysaa markaas, sidoo kale bilcaanta marka ay qooqdo lugaha ayay isku rugtaa, qofka ag fadhiya waa dareemaa, marka ay lugaha isku rugto faruuraha geedkeeda ayaa xasaasiyad dareemaya oo kulul.
Title: dhagaha carabka ka gali sidaan ookale waa biya baxee
Posted by galmada Net, Published at 8:33 PM and have 0 comments